ဝက်ဆိုဒ်များ ~ ဇင်ကို(နည်းပညာ)
7:40:00 am ၀က်ဆိုဒ်များ No comments
http://www.glitter-graphics.com/gallery.php?categoryID=42&page=1 (ဆိုဒ်နောက်ခံ ကုတ်များ)
http://www3.flamingtext.com/ (စာလုံးအလှ လုပ်ရန်)
http://www.send6.com/ (ဖိုင်တွဲကြီးတွေ ပို့မယ်)
http://www.4shared.com/ (Mp3 အပ်ပလော့)
http://myanmarwords.pikay.org/ (စာလုံးပေါင်း သတ်ပုံကျမ်း)
http://pookatoo.com/ (စာလုံးအလှ လုပ်မယ်)
http://www.pixlr.com/editor/ (အွန်းလိုင်မှာပဲ ဓာတ်ပုံပြင်မယ် ပုံပေါ်မှာလည်း စာရေးမယ်)
http://www.planet.com.mm/dictionary/index.cfm (အင်္ဂလိပ်+ မြန်မာအဘိဓာန်)
http://www.emp3world.com/ (သီချင်းကုဒ် ယူရန်)
http://www.wishafriend.com/photo/profilepics/uploadphoto.php?frame= (ဓာတ်ပုံ ကုဒ်လုပ်ရန်)
http://zaw357.multiply.com/ (ကိုဇော်ရဲ့ အိပ်မက်စိတ်ကူး)
http://www.crazyprofile.com/marquee_effects/Marqueeeffects.asp (စာလုံးတွေကို အသက်သွင်းမယ်)
http://www.lunapic.com/editor/?action=color (ကာလာကုဒ်နှင့် Upload လုပ်မယ်)
http://www.tagged.com/home.html?ect=3wca4zb0&al=1&fid=6A8E0CCA4ED554EE&tn=YWxlcnRzX3JlbWluZGVyLTEtMy0x&linkId=home_link_1 (ဓာတ်ပုံ အပ်ပလော့)
http://akyawhtoo.multiply.com/ (အှတ်တမဲ့လေးများ-- မာတီ လုပ်နည်းလေးပါတယ်။)
http://www.tagged.com/add_photo_interstitial.html?r=http%3A%2F%2Fwww.tagged.com%2Fgold.html%3Fll%3Demail%26ect%3D3wca4zb0%26al%3D1%26fid%3D6A8E0CCA4ED554EE%26tn%3DYWxlcnRzX3JlbWluZGVyLTEtMy0x%26linkId%3Dgold_page_link_1%26fragment%3D%2523t%253Dtmy_gold#t=tmy_gold (ဓာတ်ပုံ အပ်ပလော့)
http://talkgadget.google.com/talkgadget/popout (၀က်ဆိုဒ်မှ Gtalk သုံးမယ်)
http://sayarkyaung.multiply.com/ (ဆရာ kyaung)
http://showcase.pandorabots.com/pandora/talkbot?subid=b33bd02e7e345cdb (စက်ရုပ် အမနဲ့ စကားပြောချင်သော်)
http://www.rong-chang.com/tutor.htm (စက်အထီးနဲ့ စကားပြောချင်သော်
http://www.crazyprofile.com/Slide_Show/Slideshow.asp (Slide - Photo Sharing)
http://www.passwordmeter.com/ (ပါတ်စ်ဝက် လုံခြုံမှု ရှိ မရှိ စစ်မယ်)
http://freelogs.com/create.php (အလည်လာပြီးသူကို သိအောင်)
http://www.simplehitcounter.com/ (အလည်လာပြီးသူကို သိအောင်)
http://www.photofunia.com/ (ဓာတ်ပုံ ပြင်ရန်)
http://www.photobucket.com/ (ဓာတ်ပုံ ပြင်ရန်)
http://www.w3schools.com/ (html စသင်မယ်။လေ့လာမယ်.)
http://www.lunapic.com/editor/ (ဓာတ်ပုံ ကုတ်လုပ်မယ်)
http://www.picshrine.com/ ( (ဓာတ်ပုံ ကုတ်လုပ်မယ်)
http://it-traveller.blogspot.com/ (အိုင်တီ ခရီးသည်)
http://www.knowledgewar07.com/ (မိုးထက်မြင့် နည်းပညာ)
http://naivedemon.multiply.com/ (နတ်ဆိုးတစ်ကောင်ရဲ့ တမ်းချင်း)
http://paingkyaw.multiply.com/ (နှလုံးသားရဲ့ ပြူတင်း)
http://www.sharkbreak.com/widgets-list-1 (နာရီကုဒ် ယူမယ်)
http://tatetakhoe2011.multiply.com/tag/%E1%80%94%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC (ကြိုဆိုပါလျက် သူငယ်ချင်း)
http://www.flashband.net/home.php (မြန်မာ Mp3 ဒေါင်းမယ်)
http://www.sonypictures.com/mobile/ (sony mobile အတွက် ပုံလေးတွေကို ယူမယ်)
http://videokeman.com/ (Free Mp3 Code ယူမယ်)
http://text.glitterfy.com/ (စာလုံးလေးတွေ ပုံလေးတွေလှအောင်ဖန်တီးမယ်)
http://www.picturetrail.com/ (ဓာတ်ပုံလေးတွေကို ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ လုပ်မယ်)
http://www.photofunia.com/effects/taylor_and_kristen?js_uploader=no (ဓာတ်ပုံ အပ်ပလော့)
http://www.imagehousing.com/ (ဓာတ်ပုံ အပ်ပလော့)
http://wikimyanmar.co.cc/ (အွန်လိုင်း စွယ်စုံကျမ်း)
http://www.barebones.com/ (HTML သင်ကြားနည်း)
http://www.imageshack.us/ (ဓာတ်ပုံ ကုတ်လုပ်ရန်)
https://www.google.com/accounts/b/0/ManageAccount?hl=en (အီးမေးလ် ပါတ်စ်ဝက် ပြောင်းရန်)
http://www.picoodle.com/ (ဓာတ်ပုံ အပ်ပလော့)
http://tunabox.net/ (ဓာတ်ပုံ အပ်ပလော့)
http://crazybag.ning.com/profiles/blogs/4800960:BlogPost:195560 (အိမ်လှလှလေးတွေ ဆောက်ကြမယ်)
http://www.purplesnake.limewebs.com/for_blogger/radio.html (ရေဒီယို ကုတ်များ)
http://www.poqbum.com/internetradio/index.php ( အင်တာနက် ရေဒီယို ကုတ်)
http://www.akyinnarnantaw.co.cc/search/label/%E1%80%98%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%82%95%E1%80%82%E1%80%AB (ဘလော့မှာ အသုံးပြုရန်)
https://www.google.com/accounts/DisplayUnlockCaptcha (အကောင့် လော့ကျရင် ပြန်ယူရန်)
http://www.edinooyin.com/profiles/blog/list?user=3kmi3bbjgw10t (ငြိမ်းချမ်း ဘလော့)
http://www.freevideocoding.com/ (ဖလက်စောင်း ကုတ်လုပ်ရန်)
http://www.edinooyin.com/profiles/blog/list?tag=gmail (Gmail ဆိုင်ရာ)
http://goldenmyanmarparadise.ning.com/profiles/blog/list?user=2zsgy3rhikmr1 (ကောင်းလေးငယ်ရဲ့ နည်းပညာ)
http://www.edinooyin.com/profiles/blog/list?user=2avhufl2jvl90 (ကိုဇော် ဘလော့)
http://www.myanmarmuslim.net/news.php (မြန်မာ မွတ်စလင်)
http://www.htmlcommentbox.com/ (ကွန်မန့်ဘောက်စ် ကုဒ် ယူရန်)
http://www.kzarboworld.com/ (ပြုံးပန်း ဈေးခင်း)
http://www.akyinnarnantaw.co.cc/2010/11/it.html (အိုင်တီ နည်းပညာ)
http://cooltext.com/ (စာလုံးအလှ လုပ်ရန်)
http://kozaw357.multiply.com/ (ကိုဇော်ရဲ့ အိပ်မက် စိတ်ကူး)
http://www.ourmandalay.net/index.php/2009-01-08-08-31-19 (လေ့လာစရာ နည်းပညာ)
http://www.myanmardaily.net/techblog2.html (လိုတာ ရှာရန်)
http://www.manutdmm.com/pages/%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%bd%e1%80%90%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%95%e1%80%b8%e1%80%87%e1%80%9a%e1%80%ac%e1%80%b8 (ပရီးမီးယာလိဂ် အမှတ်ပေးဇယား)
http://www.manutdmm.com/ (ဘောလုံးပွဲ သတင်း)
https://tor-proxy.net/proxy/express/browse.php?u=http%3A%2F%2Fsawshadounlwei.blogspot.com%2F2010%2F09%2Fidm-ultraedit-v16201011.html&b=26 (ကိုမြတ် စုစည်းမှု)
http://sites.google.com/site/alinnyaungdownload/ (နည်းပညာနှင့် ဆော့ဝဲများ)
http://www.sagarwarmyae.org/ (စကားမြေ အွန်လိုင်း စာကြည့်တိုက်)
http://www.mylivesignature.com/ (စာလုံး ကုတ်လုပ်ရန်)
http://patheincity.com/news/ (မြိုတော် ပုသိမ် သတင်းစဉ်)
https://www.google.com/accounts/b/0/ManageAccount?hl=en (ဂျီတော့ ပါတ်စ်ဝက် ပြောင်းရန်)
https://mail.google.com/mail/signup (ဂျီတော့ အကောင့် ဖွင့်ရန်)
http://goldenmyanmarparadise.ning.com/ (ရွှေမြန်မာ ဥယျာဉ်)
http://www.anyartargroup.com/ (အညာသား group)
http://eainmatthanzin.com/flash_songs/ (အိပ်မက် သံစဉ်)
http://www.mmflashsongs.sagarwarmyae.org/ (စကားဝါမြေ တေးဥယျာဉ်)
http://www.advmyanmarmeditation.org/ (ဓမ္မစကြာနှင့် ၀ိပဿနာ ပြန့်ပွားရေး အသင်း)
http://www.internetchitthu.com/ (အင်တာနက် ချစ်သူ)
https://padauk.org/001/http://burmese.dvb.no/ ( ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့အသံ)
http://slip-meepyatite.blogspot.com/ (blogspot လုပ်နည်း)
http://www.chitthumyotaw.com/forum/categories/gtalk-and-gmail/listForCategory (ဂျီတော့နှင့် ဂျီမေးလ်)
http://www.zwmnna.co.cc/ (မောင် စွယ်စုံကျမ်း)
http://www.mutdfan.com/ (ဘောလုံး ချစ်သူများ ဆုံဆည်းရာ)
http://www.shwemyanmarlottery.com/ (ရွှေမြန်မာ ပင်ရင်း ထီဆိုင်ကြီး)
http://kothaung.multiply.com/ (ကို သောင်း မာတီ)
http://www.chitthumyotaw.com/forum/categories/5442636:Category:28078/listForCategory (အခြား နည်းပညာဆိုင်ရာ)
http://mmbloggershelpdesk.blogspot.com/ (ဘလော့ လုပ်နည်း)
http://www.mandalaygazette.com/ (မန္တလေး ဂေဇက်)
http://www.mediafire.com/myfiles.php (အင်တာနက် စပိ မြန်စေသော ဆော့ဝဲ)
http://livescore.com/ (ဘောလုံး ဂိုးစဂိုးများကြည့်ရန်)
http://www.ghre.org/mm/ (လူ့အခွင့်ရေး တိုးတက်ရေးအဖွဲ့)
http://www.venkawwida.net/ (မြိတ် ဦးကောဝိဒ)
http://mandalayspring.blogspot.com/ (မန္တလေးနွေးဦး)
http://co2zenith.blogspot.com/ (Co2zenith )
http://www.knowledgewar07.com/ (မိုးထက်မြင့် နည်းပညာ)
http://www.buddhafm.com/ (ဗုဒ္ဓ FM)
http://www.internationalmeditationcentre.org/( INTERNATIONAL MEDITATION CENTRE)
http://kp3family.blogspot.com/ (Kp3 နည်းပညာ)
http://www.dhammaweb.net/tipitaka/ (တိပိဋက မြန်မာပြန်)
http://dhammabank.com/ (ဓမ္မ စာအုပ်စင်)
http://mglhulin.blogspot.com/ (လူငယ်တစ်ဦး၏ ဆုံမှတ်)
http://chanmyay.org/ ( CHANMYAY YEIKTHA MEDITATION CENTRE)
http://simpleviewsonmyland.blogspot.com/ (Simple Views )
http://kozaw357.multiply.com/ (ကိုဇော်၏ အိပ်မက်စိတ်ကူး)
http://tayzathura.blogspot.com/ (KING OF THE UNIVERSE )
http://www.buddhanet.net/ (ဗုဒ္ဓ net)
http://drlunswe.blogspot.com/ (ဒေါက်တာ လွမ်းဆွေ)
http://malaria88.blogspot.com/ (ချစ်ချစ်ရဲ့ နော်မန်)
http://www.ashinnyanadipa.com/ (အရှင်ဉာဏဒီပ- ဓမ္မရတနာ)
http://thadar.blogspot.com/ (မ သဒ္ဓါ)
http://www.mawluu.com/ ( မင်္ဂလာသတင်းစဉ်)
http://www.thisismyanmar.com/nibbana/index.html (နိဗ္ဗာန တရားတော်များ)
http://myanmarbloggerposts.blogspot.com/ (MM BLOGGER POSTS)
http://myanmaronlinewatch.blogspot.com/ (MM ONLINE WATCH)
http://8888newgenerations.blogspot.com/ (NEW GENERATIONS )
http://www.movies-links.tv/ (Movies Links)
http://movies.mmblogs.net/ (MMBlogs's movies)
http://mistakemusiclibrary.multiply.com/ (MUSIC LIBRARY)
http://ayeyarwaddylibrary.blogspot.com/ (ဧရာဝတီ စာကြည့်တိုက်)
http://myanmardemocracycongress.blogspot.com/ (မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက် )
http://library.eainmathlaing.com/ (အိမ်မက်လှိုင်း စာအုပ်စင်)
http://www.burmeseclassic.com/tayar_section.php ( BURMESE CLASSIC ဓမ္မဆိုက်)
http://wntbookshelf.com/ (၀ိညာဉ်သစ် စာအုပ်စင်)
http://movie.myanmar-movie.net/ (မြန်မာ MOVIE.NET)
http://myanmarsar.zaung.net/ (မြန်မာစာ မြန်မာစကား)
http://mmlyrics.com/ (မြန်မာ LYRICS.COM)
http://www.dhammadownload.com/ ( DHAMMA DOWNLOAD)
http://www.letmewatchthis.com/ (Let Me Watch This)
http://onlinewatchmovieslink.blogspot.com/ (Online Movies Link)
http://myanmarmp3album.com/ (မြန်မာ MP3 ALBUM.COM)
http://kathitwinemyanmar.blogspot.com/ (မူကသစ်ဝိုင်း ၀ိပဿနာ)
http://www.khayanpyareinmet.com/ (ခရမ်းပြာ အိပ်မက်)
http://www.myanmarmp3.net/ (မြန်မာ MUSIC.COM)
http://www.myanmarmp3.net/ (မြန်မာ MP3.NET)
http://paramis.org/ (PARAMI DHAMMA WEB)
http://www.sagarwarmyae.org/ (စကားဝါမြေ အွန်လိုင်း စာကြည့်တိုက်)
http://shwevideos.com/index.php ( ရွှေဗွီဒီယို)
http://www.myanmarelibrary.com/ (MYANMAR E-LIBRARY)
http://myanmarnetworknews.com/ (MYANMAR NETWORK NEWS)
http://missions.itu.int/~myanmar/canlander100/caln-index.html (နှစ်တစ်ရာ ပြက္ခဒိန်)
http://shweone.wordpress.com/ (SHWESAGAR E BOOKS)
http://www.myanmarmp3.com/ (မြန်မာ MP3.COM)
http://www.theravada-3p.org/ (ဆရာဦးမြင်လွင်- သန့် တည် ပွား)
http://lanka-msma.blogspot.com/ (သီရိလင်္ကာရောက် မြန်မာကျောင်းသား ရဟန်းတော်များ)
http://lknt4.blogspot.com/ (ဓမ္မပဒ- ပါဠိ+မြန်မာ+အင်္ဂလိပ်)
http://www.myanmarworld.com/ (A ROAD TO MYANMAR)
http://www.tipitaka.org/ (THE PALI TIPITAKA)
http://dhammapannkhinn.blogspot.com/ (ဓမ္မပန်းခင်း ဗုဒ္ဓစာကြည့်တိုက်)
http://www.myanmarteldir.com/ (MYANMAR TELEPHONE DIRECTORY)
http://newpowerofburma.com/blog.html (NEWS COLLECTION)
http://www.burmeseclassic.com/ (BURMESE CLASSIC)
http://www.myanmardaily.net/ (အကောင်းဆုံးမြန်မာ ၀က်ဆိုဒ်များ ဆုံဆည်းရာ)
http://newpowerofburma.com/blog.html (NEWPOWER of BURMA)
http://updatewatch.blogspot.com/ (BEST 100 MYANMAR BLOGS)
ဒါကတော့ Epson Tx210 printer ကို counter reset ချတဲ့ နည်းပါ။ သုံးနည်းကတော့ လွယ်ပါတယ်။ အရင်တုန်းကလည်း ပြောခဲ့ပါတယ်။ အားလုံးအဆင်ပြေမယ်လ...
ဒီပို့ လေးကို ကျွန်တော်လို့သူငယ်ချင်းတွေအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.... တော်တော်ကို အားကိုးရတဲ့ကျွန်တော်လက်ဆွဲ စာအုပ်လေးတအုပ်ပေါ့.....
ဘလော့ကိုဖုန်းမှာဖွင့်ရင်ပေါ်သော စတိုင် ကိုပြောင်းချင်ရင်
............ပိုစ့်အစ.............. ကဲကဲ စဖောမယ်နော် အောင်လေးအောင်မြင်ပါစေနော် အဆင့် (5) ဆင့် ထဲနော် တော်တော် လွယ် ပါတယ် ►1. ...
အမှောင်ချထားသော သိပ်ပြီးပွင့်လင်းလွန်းတဲ့ သူငယ်ချင်း ဘယ်သူမှ မသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ကွက်လပ်တစ်ခုရဲ့ လျှို့ဝှက်ခြ...
Android application ရေးသားဖန်တီးခြင်းဆိုင်ရာ စာအုပ်
Android application ရေးသားဖန်တီးခြင်းဆိုင်ရာ အခြေခံသဘောတရားများ စိတ်ဝင်စားတဲ့သူငယ်ချင်းတွေ ပါ ယူသွားပေါ့ဗျာ Download >>> ...
Firmware တင်နည် ကတော. firmware ကို download ဆွဲ ပီး ၇င် zip ဖြည် dload Folder တခုထဲကို Copy ယူပီ SD Card ထဲထည်.ပါ ပြီး၇င် phone ကို...